आर्थिक बबल के हो? | अर्थव्यवस्था वित्त
आर्थिक बबल के हो?
जोस रीसियो | | संकट, सामान्य अर्थव्यवस्था
लगानीकर्ताहरू सबैभन्दा बढी डराउने परिदृश्य मध्ये एक तथाकथित आर्थिक बबल हो। अचम्म मान्नुपर्दैन, यो एक प्रक्रिया हो जुन महत्वपूर्ण हुन्छ बजार मा डुबकी चल आय। तिनीहरू बारम्बार हुँदैन, तर जब उनीहरू देखा पर्दछ तपाईसँग ब्यागमा कुनै पोजीशनबाट टाढा रहनुको विकल्प छैन। का लागि मूल्यहरु मा कटौती शेयरहरू तिनीहरू धेरै गहन छन् र न्यूनतम स्तरमा ड्रप गर्न सक्छन्। सबैभन्दा धेरै सट्टा लगानीकर्ताहरूले उनीहरूको फाइदा लिन सक्छन् भन्ने कुरा।
यद्यपि सबै साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूलाई यसको वास्तविक अर्थ थाहा छैन। ठिक छ, ताकि तपाईंसँग अब यो स्पष्ट छ, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि आर्थिक बुलबुले, जसलाई वित्तीय पनि भनिन्छ, एक हो कार्यवाही स्टक एक्सचेन्ज त्यो हुन्छ जब त्यहाँ वित्तीय बजार मा एक गम्भीर प्रभाव छ। जे भए पनि, र यो अधिक गम्भीर छ, बुलबुले पनि अनिश्चितता बिना र अनुमान दृश्य बिना नै देखा पर्दछ। यद्यपि पछिल्ला केसहरूमा तिनीहरू विभिन्न वित्तीय एजेन्टहरू द्वारा पहिचान गर्न बढी जटिल छन्।
अर्को कारक जुन तपाईंले अब थाहा पाउनुपर्दछ कि यो आर्थिक घटना यसका प्रक्रियाहरूका साथ सामान्य हुँदै गइरहेको छ मूल्य समन्वय। स्पेनीमा हालका बर्षहरूमा अतिसंवेदनशील तथाकथित रियल इस्टेट बबलको विशिष्ट मामलामा राम्रोसँग बुझ्ने कुरा। अर्कोतर्फ, यो परावर्तन हो जुन महिमा वा आर्थिक बूमको अवधिको परिणामको रूपमा देखा पर्दछ। आर्थिक विस्तारको अवधि पछि यो परिदृश्य भन्दा पहिले सधैं हामीले यस लेखमा कुरा गरिरहेका छौं।
1 बबल: एउटा क्र्याकमा अन्त्य हुन सक्छ
2 कसरी प्रकोप पत्ता लगाउने?
3 यी आन्दोलनको प्रभाव
4 आपूर्ति र माग को कानून
5 बजार प्रवृत्ति
6 यसको उपस्थितिको अन्य कारणहरू
बबल: एउटा क्र्याकमा अन्त्य हुन सक्छ
आर्थिक बबलको बारेमा एक चाखलाग्दो तथ्य यो हो कि यो एक आर्थिक क्र्यासमा अन्त्य हुन सक्छ जुन देशको ठूलो धनलाई नष्ट गर्न सक्छ। जस्तो कि हालका वर्षहरूमा भएको छ ठूलो उदासीनता १ 1930 s० को दशक र १ 1990 XNUMX ० को दशकमा जापानमा हाउजिंग बबल। यी उदाहरणहरू हुन् जसले लगानीकर्तालाई यति धेरै चिन्तित गर्ने यस वित्तीय आन्दोलनको राम्रो वर्णन गर्दछ। अन्य कारणहरूको बीचमा किनकि उनीहरूले शेयर बजारमा उनीहरूको काममा धेरै पैसा गुमाउन सक्दछन्। अन्य प्राविधिक विचारहरू पछाडि र वित्तीय बजारको मौलिक दृष्टिकोणबाट पनि।
तिनीहरूको प्रकृतिको बारेमा, उनीहरूको भिन्नै ढाँचा छ र त्यो निम्न विभाजनमा साकार छ जुन हामीले तपाईंको लागि औंल्याउँछौं: तर्कसंगत, आन्तरिक र यो पनि संक्रामक को रूपमा कल। यद्यपि पछिल्लोसँग अरू समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण भन्दा बढी एक मनोवैज्ञानिक कम्पोनेन्ट छ। यो विशेषता यो छ कि यो तथ्य एक महत्वपूर्ण चरण द्वारा पहिले छ। जहाँ खरीददारहरू अभाव हुन थाल्छन्, र केही लगानीकर्ताहरूले वित्तीय बजारमा आफ्नो स्थान बेच्न सुरु गर्छन्। डरलाग्दो प्रकोप मा अन्त गर्न वा एक अवधि को लागी तपाईले उनीहरुलाई क्र्यासको रूपमा राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, यद्यपि लगानीकर्ताहरु लाई नराम्रो सम्झनाहरु सहित।
कसरी प्रकोप पत्ता लगाउने?
जब तथाकथित आर्थिक बबल उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ स of्केतहरूको श्रृंखलाहरू छन् जसले स indicate्केत गर्दछ कि हामी यस नाजुक अवस्थाको सामना गर्दैछौं देश वा अर्थतन्त्रमा। तिनीहरू पहिचान गर्न सजिलो छ र सबै भन्दा माथि यो तलका संकेतहरूमा आधारित छ जुन हामी तपाईंलाई तल झल्काउँछौं ताकि तपाईं यो विशेष आर्थिक आन्दोलन थोरै स्पष्ट पार्न सक्नुहुनेछ।
सामान्य पतन इक्विटी बजारको, स्तरहरू जुन धेरै गहन हुन सक्छ र त्यो अनुबन्धको एक उच्च स्तरको साथ हुन्छ। केही हप्तामा, सेयरको मूल्य उल्लेखनीय रूपले घटेको छ।
El खपत कम हुन्छ विशेष गरी यसले यो देश वा भौगोलिक क्षेत्रको अर्थव्यवस्थालाई जोखिममा पार्न सक्छ। प्रयोगकर्ताहरूले सेवा सामानहरू खरीद गर्न कम पैसा खर्च गर्छन्, थोरै धितो राख्दछन् र उनीहरूको नियमित खरीदहरूमा कम पैसा खर्च गर्दछन्। अन्य विचारहरुमा बचतको बढुवाको साथ।
अर्थव्यवस्थाको विकास स्तरमा खस्छ जुन धेरै खतरनाक मान्न सकिन्छ। अचम्म मान्नुपर्दैन, यो धेरै सामान्य छ कि तिनीहरू भित्र छन् नकारात्मक वृद्धि धेरै तिमाही वा बर्ष उदाउँदो देशहरूमा जस्तै। यो आर्थिक वा आर्थिक बबलमा सबैभन्दा विनाशकारी कारक हो।
El पारो यो बढ्दछ जब यो आर्थिक अवस्था आउँछ, केही देशहरूमा प्रतिशतका साथ सरकारहरूको लागि अनुमान गर्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ। विशेष गरी जहाँ त्यहाँ संरचनात्मक रूपमा समस्याहरू छन्, उदाहरणका लागि स्पेनमा। २०% माथिको स्तरको साथ, पछिल्लो आर्थिक संकटको रूपमा २०० happened र २०० in मा भयो।
मा गडबडी मुद्रा बजार यो अर्थव्यवस्था मा यि धेरै समस्याग्रस्त परिदृश्यहरुका साधारण डिनोमिनेटर मध्ये एक हो। एकल ट्रेडिंग सत्रमा यसको अधिकतम र न्यूनतम मूल्यको बीचमा भिन्नताहरू जुन १०% को स्तर भन्दा बढी हुन सक्छ वा यी वित्तीय सम्पत्तिहरूको सबैभन्दा स्पष्ट आन्दोलनमा अधिक तीव्रताका साथ।
यी आन्दोलनको प्रभाव
त्यहाँ कुनै शंका छैन कि आर्थिक बबलले सामान्यतः समाजमा हानिकारक प्रभाव पार्न सक्छ। यो मुख्यतया तथ्यको कारण हो असामान्य र लामो समय सम्म वृद्धि केहि सेयर वा घर जग्गा सम्पत्ती को मूल्य अनुमान को एक सर्पिल ट्रिगर कि अर्थव्यवस्था को नष्ट मा समाप्त हुन्छ। आर्थिक बबल एक निश्चित अवधि छैन। यदि होईन भने यसको विपरित, यो केहि महिनासम्म रहन्छ (यद्यपि यो परिदृश्य प्रायः हुँदैन) र यसले धेरै बर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था वा कमसेकम यस ग्रहका केही राष्ट्रहरूलाई नष्ट गर्दछ।
अर्कोतर्फ, यो धेरै सामान्य छ कि जब हामी यस चरित्रात्मक आर्थिक आन्दोलनको बारेमा कुरा गर्दैछौं जस्तो देखिन्छ कि हामी सिधै स the्कट वा घर जग्गाको बुलबुलालाई संकेत गर्दैछौं। तर प्रतिबन्ध यो हो कि तिनीहरू आवश्यक रूपमा मेल खाँदैन, यो टाढाबाट। यद्यपि तिनीहरू यसको मूलसँग मिल्दछ किनकि योसँग धेरै राम्रा परिभाषित अवरोधहरू छन् जुन वित्तीय विश्लेषकहरू मार्केटमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्ठाका साथ विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अचम्म मान्नुपर्दैन, वित्तीय बुलबुलेको उत्पत्ति प्राय: अटकल हो। सट्टेबाजीले पछि एक उच्च मूल्यमा बेच्नको मुख्य उद्देश्यको साथ एक सम्पत्ति वा उत्पादन प्राप्त गर्न समावेश गर्दछ।
आपूर्ति र माग को कानून
जे भए पनि, त्यहाँ संकेतहरूको श्रृंखला छ जुन तपाईंलाई यसको व्याख्यामा केही उपकरण दिन सक्छ। विशिष्ट अवस्थामा जस्तो कि वित्तीय बुलबुले एक आर्थिक घटना हो जुन आपूर्ति र मागको बिचमा एक कडा बेमेल हुन्छ। जब यो हुन्छ, यसले एक देशको अर्थतन्त्र वा विश्वव्यापी रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न गर्दैछ, जस्तो कि आर्थिक संकटको साथ हालका वर्षहरूमा भइरहेको छ। तिनीहरूले खास देशलाई असर गर्दैन, बरु धेरै ठूलो आर्थिक क्षेत्रहरु, उदाहरण को लागी यो यूरो क्षेत्र मा हुन सक्छ।
अर्को पक्ष जुन अब देखि विचार गर्नुपर्दछ भन्ने तथ्यमा आधारित छ कि केहि हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यी धेरै स्पष्ट आन्दोलनहरूको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। किनभने वास्तवमा यो मूल्यमा कडा बृद्धि हो, जुन एक आर्थिक बुलबुलेको टेक अफ जस्तो लाग्न सक्छ, यो आवश्यक रूपमा बुलबुलासँग मिल्दैन। यस दृष्टिकोणबाट, यसलेaको समस्याहरूको श्रृंखला समावेश गर्दछ सहि निदान यी सुविधाहरूको एक बुलबुले के हो। यसको सबैभन्दा आधारभूत संकेतहरू भन्दा पर र त्यो विशेष गुरुत्वाकर्षणको अन्य वित्तीय आन्दोलनको साथ भ्रमित हुन सक्छ तर त्यो एक वित्तीय वा आर्थिक बबल बन्न सक्दैन।
जे भए पनि, तपाइँले अब बाट थाहा पाउनुपर्दछ कि शेयर बजारहरूले प्रवृत्तिहरू देखाउँछन् जुन आर्थिक ब्यबल्ससँग मिल्दछ। न्यू योर्क डो-जोन्स सूचकांकका निर्माता डाउका अनुसार शेयर बजारले तीन प्रवृत्ति देखाउँदछ: प्राथमिक चलन, दोस्रो प्रवृत्ति, र तृतीयक प्रवृत्ति। यो पछिल्ला स्थानमा हो जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौं बबल हुन सक्छ। अचम्म मान्नु पर्दैन, यो सबै माथि वर्णन गरिएको छ किनभने मा तृतीयक प्रवृत्ति यो शेयर बजार मा समान सत्र को समयमा उत्पादन को मूल्यहरु मा उतार चढाव संग मेल खान्छ।
अर्कोतर्फ, यो पनि यस सन्दर्भमा ध्यान दिनु पर्छ कि एक वित्तीय बजार छ भन्ने तथ्यलाई ओभररेटेड र बिक्री विशेष बलका साथ लगाईन्छ संकेतको अर्को प्रकार हो जुन द्वारा यस प्रकारको बुलबुले स collected्कलन वा पत्ता लगाउन सकिन्छ। जहाँ लगानीकर्ताहरूमा तीब्र झरना र त्रास हुन्छ, उनीहरूले इक्विटी बजारमा उनीहरूको लगानी बेच्नेछन कि उनीहरूको लगानीमा धेरै पैसा गुमाउँदा पनि।
यसको उपस्थितिको अन्य कारणहरू
जे भए पनि, विश्लेषणका अन्य स्रोतहरू छन् जुन यो महत्त्वपूर्ण तथ्य वा आर्थिक घटनाको व्याख्या गर्छन्। उदाहरण को लागी, यो एक हो तर्कहीन विश्लेषण, सम्पत्ति को पछिल्लो अतीत मा प्राप्त आय मा आधारित छ। कुनै पनि समयमा खातामा वित्तीय सम्पत्तिहरूको मौलिक विश्लेषणको अंश लिने बिना। र त्यसले साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूको अवांछित प्रभाव निम्त्याउन सक्छ। अन्य प्राविधिक विचारहरू पछाडि र आधारभूत दृष्टिकोणबाट पनि।
जहाँ यो पनि सम्भव छ कि अत्यधिक मूल्यवान बजारमा, र अत्यधिक आशावादी वातावरणको साथ, यसले लगानीकर्ताहरूको रायमा परिवर्तन गर्न सक्छ कि यी परिस्थितिहरू लामो समयको लागि परिवर्तन हुँदैन। परिदृश्यहरू सिर्जना गर्ने बिन्दुमा जुन साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूको कार्यहरूको लागि अनुकूल हुँदैन। जहाँ तिनीहरूले प्राप्त गर्न भन्दा गुमाउन बढी छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » आर्थिक बबल के हो?
प्रयोगकर्ताहरूले म्युचुअल फन्ड्स त्याग्छन्: अधिक मोचन